ဘုန်းကျော်: 04/01/2010 - 05/01/2010
ကိုလွမ်းဏီက ရိုးမပေါ်မှာ အိပ်ပါစေ ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကိုငြိမ်း နိုးခဲ့တယ်။
ရိုးမဆွယ်မှာ နေကွယ်ခဲ့တဲ့ အချိန်လား။
မင်းက ရဲဝံ့သူကြီး တယောက်ပါ။
ဒီလှိုင်းတွေ မြင့်သစ်တဲ့ ရာသီ
(ရဲဘော်ရေးဖော် ငြိမ်းလူသို့…)
၂၉ - ၄- ၂၀၁၀
ကဗျာဆရာ ဆောင်းလူက အကွေ့နေ့ဆိုပြီး ကိုငြိမ်းကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်။
ကဗျာပန်းခင်းကို ပျိုးရင်းမှ …
မီးခိုးတလူလူ ရွက်တလူလူနဲ့ …
(ဧပြီ ၂၉၊ ၂၀၁၀)
(ဧပြီလ ၂၉ ရက်၊ ၂၀၁၀ နေ့မှာ ဘဝတပါးသို့ ကူးပြောင်းသွားတဲ့
ကဗျာဆရာ မောင်ငြိမ်းလူ (ဟယ်လ်ပင်) သို့ …)
Drinking too much killsalot of youths in our movement. Please be careful.
Credit to ညီလင်းဝင်း
Burma's Got Talent
စိုင်းစိုင်းလောက်တော့သနားတယ်။ တော်တော်...တော်တဲ့ခလေးလေးတွေပါလား...။ ပိုက်ဆံရှိရင်တော့ ဒီခလေးတွေကို စီရီးတစ်ခွေလောက်ထုတ်ပေးအုံးမယ်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Friday, April 16, 2010
Song for Burmese
Credit to ဦးမေတ္တာ...
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Wednesday, April 14, 2010
၂၀၁၀ရေနဲ့ စစ်အာဏာရှင်အညစ်အကြေးကို ဆေးကြောရမည်...
Credit to ကိုဇ်ာမိုးကျော်ကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Tuesday, April 13, 2010
ကျနော်တို့ ပါတီမှာ လူ့ဘောင်သစ်ကျောင်းဆိုတာရှိတယ်။ ဒီကျောင်းရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတော့ဂုဏ်ယူတယ်ဗျာ။ တကယ်ကောင်းတယ်။ ဒါမျိုးဖြစ်ရမှာ။ အစည်းအဝေး၊ အခမ်းအနားမှာ လေပန်းတာထက်စာရင်ဒါက ပိုပြီးကျက်သရေရှိတယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်။ ကိုငြိမ်းတစ်ယောက်မှုးပြီးကွေးနေအောင်ကတာကိုလည်းဂုဏ်ယူတယ်ဗျာ။
လူ့ဘောင်သစ်က ရဲဘော်တစ်ယောက်အနေနဲ့ လူ့ဘောင်သစ်မှာ ဘာတွေခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုရှိလဲဆိုတာ ရေးမယ်။ ရဲဘော်ခြင်းတူပေမဲ့၊ မျက်နှာကြီးရာဟင်းဖတ်ပါ...ဆိုသလိုမျိုးဆက်ရေးမယ်။ ဘယ်သူကိုမှသာစေနာစေမရှိစေရဘူး။ ကျနော့်အမြင်ကို ကျနော်ရေးမယ်။ မကြိုက်ရင် အခုကတည်းက ကျနော်ကိုပြောပါ။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Friday, April 09, 2010
Water Festival in Perth
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Sunday, April 04, 2010
ကိုထူးချစ် (GHRE) မှ ယနေ့အစည်းအဝေးကိုပေးပို့သော အကြံပြုစာ
နအဖ ရဲ့ လုပ်ဟန်အားလုံးသိပြီးဖြစ်တယ်။ လက်တွေ့အလုပ်လုပ်ဖို့လိုပြီ။ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေ တပ်ပေါင်းစုတွေဖေါင်းပွနေတယ်။ တစ်ချို့ဆို အနှစ်(၂၀) အတွင်းမှာ လူအယောက် ( ၂၀) တောင်မစုနိုင်ဘဲနဲ့ တပ်ပေါင်းစုဝင်တွေဖြစ်နေတယ်။
“ ပြည်ပမှာ စစ်မှန်ညီညွတ်ပြီး အမှန်တကယ် အလုပ်လုပ်နိုင်မဲ့ တပ်ပေါင်းစုရှိရမယ်”
တစ်ချို့ဆိုအဖွဲ့အစည်းကိုပဲ ဖက်တွယ်ပြီး ရသေ့စိတ်ဖြေ တော်လှန်ရေးပဲလုပ်နေကြတယ်။
လူထုကိုယုံဖို့လိုတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ကိုအလုပ်အကြွေးပြုဖို့လည်းလိုတယ်။ သူတို့မိသားစုတွေနဲ့ သားသမီးတွေကို ပညာသင်ပေးဖို့လိုတယ်။ ထိုင်းနိင်ငံမှာ အခြေစိုက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့အားကိုယုံဖို့လိုတယ်။သူတို့ကိုသေသေချုာချာစည်းရုံးလို့ရနိင်တယ်။သူတို့တွေမှာ တော်လှန်ရေးအတွက် အင်မတန်အရေးပါတဲ့ အရည်အချင်းတွေရှိနေတယ်ဆိုတာ နားလည်ဖို့လိုမယ်။
အရေးတကြီးလုပ်သင့်တာက ပြည်တွင်းမှာ လုပ်နေတဲ့ လူတွေကိုထိထိရောက်ကူဖို့လိုမယ်။ လူမှု့  ဖွင့်ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကို NLD အနေနဲ့ ထိထိရောက်ရောက်လုပ်နိုင်အောင် အကူအညီပေးရမယ်။ အဲဒါလဲ နိုင်ငံရေးလုပ်တာဘဲလို့ကျနော်ယုံကြည်တယ်။ NLD အနေနဲ့ လူထုအထောက်အပြုလုပ်ငန်းတွေကို တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် လူထုက NLD ကို ပိုပြီးအားကိုးလာလိမ့်မယ်။ ပြည်တွင်းမှာ လုပ်စရာတွေအများကြီးရှိနေတယ်( ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊လူငယ်ထုဖွံ့ဖြိုးရေး၊ အမျိူသမီးအရေး၊လူ့အခွင့်အရေး)တစ်ချိူ့ဒေသတွေမှာ NLD အနေနဲ့စထားပြီးဖြစ်တယ်။ ပိုလုပ်နိုင်အောင်ပံ့ပိုးဖို့ပြောတာပါ။
ကျနော်တို့ဒီဖက်မှာရှိတဲ့ အဖွဲ့တွေ၊လူပုဂိုလ်တွေအနေနဲ့ ရိုးသားစွာ အမှန်အတိုင်းမြင်တတ်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီလို့ပြောချင်တယ်။
စာရေးကောင်းတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကလဲ စာတွေရေးရေးပြီး ဟိုလူဒါလုပ်သင့်တယ်၊ဒီအဖွဲ့ဒါလုပ်သင့်တယ်လို့ ပြောနေမဲ့အစား ကိုယ်လုပ်နိုင်တာကိုစလုပ်သင့်ပြီ။ ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးဟာကျနော်တို့အရေး...ခင်ဗျားတို့အရေးဖြစ်တယ်။
နိုင်ငံတကာကိုဘဲအားကိုးနေလို့မရဘူး။ အမှန်တကယ် မျိူးချစ်စိတ်ရှိတဲ့ လူတွေ စုစည်းမယ်၊တကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ကျနော်တတ်နိုင်တဲ့ဖက်ကပူးပေါင်းဖို့အဆင်သင့်ဘဲ။
ဒါပေမဲ့ statement ပဲထိုင်ထုတ်နေတဲ့တပ်ပေါင်းစု ဆိုရင်တော့ အခု အနှစ်၂၀ ကျော်ဖြတ်သန်းပြီးပြီ၊ နောင်အနှစ် ၂၀၀ ကျော်ဖြတ်သန်းဖို့ဘဲရှိတော့တယ်။
၁) UG ဆိုပြီး ပြည်တွင်းမှာ ငွေတွေ ပုံအောသုံးနေမဲ့အစား။ အထဲမှာလုပ်နေတဲ့လူတွေကို စနစ်တကျထောက်ပံ့သင့်တယ်။
၂) နိုင်ငံခြားမှာရပ်တည်နေတဲ့ တပ်ပေါင်းစုတွေအနေနဲ့ ထိုင်း၊ စင်္ကာပူ၊ မလေးရှား စတဲ့နိုင်ငံတွေရောက်နေတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေရဲ့ ထောက်ခံမှုကိုယူပါ။ သူတို့အတွက် Welfare လုပ်ငန်းတွေ၊ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ပါ။
၃) တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့တွေ ( အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်)က ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ထိုင်မနေပါနဲ့။ လူထုစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ပါ။ ပြည်ပမှာရှိတဲ့ မြန်မာလူထုအားကိုယုံယုံကြည်ရယူပါ။
လူမှု့ရေး/လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူ ( ထိုင်းနိုင်ငံ)